Nagu saabsan - Linhai Qisheng Rubber iyo Caaga Product Co., Ltd.
Fluoro Silicone tubbo
CAC silikoon tubbo
Xirmooyinka tuubada silikoonka
Qiiqa Hawada Silicone / tubbo tubbo
Qalabka silikoon ee qaboojiyaha ah ee 'Turbo tubbo Kit'
qalabka siligga silikoon
Tubbada silikoon ee caadiga ah
Tubbo Toos ah
tubbada kululeeyaha silikoon
tuubada tuubada reducer
tubbo labalaab toosan
T nooca tuubada silikoonka
Tuubada caagga ee Extrusion
Duub tuubada Rubber
Linhai Qisheng Rubber iyo caaga Product Co., Ltd., oo ku yaal aagga warshadaha Youxi, Linhai, Zhejiang, waa 15 km fog ka yimid Ningbo-Taizhou-Wenzhou
bixitaanka wadada weyn iyo 8 km ka fog bixitaanka wadada weyn ee Taizhou-Jinhua oo leh marin gaadiid oo haboon.
Linhai Qisheng Rubber iyo caaga Product Co., Ltd., oo ku yaal aagga warshadaha Youxi, Linhai, Zhejiang, waxay 15 km u jirtaa ka bixitaanka wadada weyn ee Ningbo-Taizhou-Wenzhou iyo 8 km oo ka fog bixitaanka wadada weyn ee Taizhou-Jinhua oo leh marin gaadiid oo haboon. Waxaa la aasaasay 1999, Linhai Qisheng wuxuu daboolayaa aag dhul ah 18000㎡ iyo aagga dhismaha ee 13000 ㎡. Awoodda wax soo saar sanadle ah ee kaladuwan oo gaar ahtuubbooyinku waa in ka badan 6 milyan oo gogo '. Illaa iyo hadda, Linhai Qisheng waxaa ka shaqeeya in ka badan 170 shaqaale ah, oo ay ku jiraan 32 farsamayaqaanno injineernimo ah.
Linhai Qisheng waxay leedahay taxane wax soo saar horumarsan, tijaabo iyo qalab sheybaar. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah tuubada caagga extrusion, tuubada caag caaryada, tubbada silikoon, fluorosilicone tubbo iyo alaabooyin kale oo taxane ah, oo si ballaadhan loogu dabaqaa meelaha baabuurta waaweyn, basaska, baabuurta rakaabka, baabuurta injineernimada, baabuurta beeraha, baabuurta militariga iwm. laga helay Shiinaha, Yurub iyo Ameerika oo leh sumcad iyo suuq ballaadhin joogto ah. Linhai Qisheng waxay muddo dheer keentey shirkadda Dongfeng Motor Corporation, AGCO Beeraha, JCB iyo shirkado kale, waxayna ku guuleysatey amaanta loo dhan yahay.
Linhai Qisheng waxay si gaar ah ugu talagashay tayada wax soo saarka. Iyada oo leh koox khibrad leh iyo nidaamka xakamaynta tayada wanaagsan, Linhai Qisheng waxay heshay IATF 16949: shahaadada 2016 waxayna si rasmi ah uga dhaqan gashay dhammaan heerarka wax soo saarka. Heerka maaraynta joogtada ah ee hagaajinta ayaa aasaas adag u ah xasilloonida tayada wax soo saarka. Si loo xoojiyo cilmi-baarista iyo horumarinta sayniska, kor loogu qaado awoodda hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda iyo tartanka suuqa, iyo in la hubiyo horumarka waara ee shirkadda, Linhai Qisheng wuxuu aasaasay Xarunta Teknolojiyada muddo 6 sano ah waxaana lagu abaalmariyay ganacsi heer sare ah oo heer qaran ah iyo shirkad ku saleysan teknoolojiyadda Zhejiang. . Marka la gaaro 2020, Linhai Qisheng wuxuu si guul leh u lahaan jiray 20 shahaado Istaraatiijiyad Nooc Istaraatiiji ah,
Marka la eego falsafada ganacsiga ee "tuubbo kasta ayaa sifiican looga dhigi doonaa macaamilka", waxaan si kal iyo laab ah ugu martiqaadaynaa ganacsatada adduunka inay nala shaqeeyaan oo ay horumariyaan horumarka guud
Aagga Warshadaha Youxi, Linhai, Zhejiang, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2019-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Alaabada Kulul, Khariidadda bogga